Bitcoin nọ n'ihe ize ndụ nke ịdaba na $20 - CoinWorldMap
Ihe ize ndụ Bitcoin na-adaba na $20
Mee 12, 2022 Binance, Bitcoin, Ethereum
Na Tọzdee, Bitcoin nọgidere na-efunahụ uru ya, na-adọkpụrụ akụ crypto ndị ọzọ na ya. N'oge ederede, BTC na-ere ahịa na $ 28 mgbe ọ kwụsịrị nkwado June nke $ 235 ma daa na $ 28 tupu taa. Ethereum dara $000 tupu ọ gbakee ruo $26.
N'ime awa 24 gara aga, ngụkọta mmiri mmiri ruru ijeri $1,28, yana ndị ahịa 411 lekwasịrị anya, ka Coinglass siri kwuo. Isi ego nke ahịa crypto zuru ụwa ọnụ n'ụbọchị gara aga dara site na 467% wee bụrụ ijeri $15,33.
Onye nyocha Crypto Ali Martinez na-ekwu na enwere ike inwe mmegharị na-adịghị mma na mbara igwe dị ka BTC mebiri usoro usoro akụkọ ihe mere eme, nke nwere ike izipu ọnụ ahịa ala 40,59% na $ 20.
Agbanyeghị, ọdịda Tọzdee yiri ka ọ kpalitere ịzụrụ ihe, yana mgbanwe asatọ kachasị elu site na azụmaahịa azụmaahịa na-egosi oke ịzụrụ ihe na akwụkwọ iwu ha. Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụ azụta dị arọ n'ofe mgbanwe crypto niile bụ 64,63%, ebe BitMEX na-eduga na 83,7%, OKX sochiri na 75,35% wee deribit na 72,7%.
Ịre ahịa ahụ metụtakwara akụkụ ndị ọzọ nke crypto: ọnụ ọgụgụ nke liquidation nke ngalaba ịgbazinye ego Defi ruru $130 nde n'ụbọchị gara aga, nke ọhụrụ dị elu maka afọ. Usoro ndị a kacha emetụta gụnyere AAVE, nke tụfuru $64,3M, Venus tụfuru $38,19M, yana Compound tụfuru $13,02M.
The hype gburugburu statscoins, karịsịa dị ka Terra depegged UST site na dollar n'izu a, e boro ebubo igbu ahịa ahịa.
"Enwere nrụgide ịkwaga na stablecoins ugbu a n'ihi na ha na-echegbu onwe ha banyere ihe ize ndụ egosiri na UST. Ihe omume a nwere ike bụrụ ihe na-agbawa obi na akụkọ ihe mere eme nke cryptocurrencies, ma eleghị anya ihe dị ka ijeri $ 30 ka ebibiri, "Frank Chapparo, onye isi akụkọ maka The Block, gwara CNBC.
UST, bụ nke mbụ depegged na ngwụsị izu mgbe stablecoin dara n'okpuru $ 0,98, na-eme ka LFG mee ihe mberede iji kwalite uru dollar ya, yiri ka ọ na-akawanye njọ. Stablecoin dara na $ 0,225 na Wednesde, ọ bụ ezie na ọ gbakere ugbu a na $ 0,48. LUNA, akara ala maka Terra, nke ruru $ 120 na mbido Eprel, atawokwa ahụhụ, na-agbada karịa 98% n'izu a naanị $ 0,07 n'oge edere.
Otú ọ dị, FUD stablecoin na-aga n'ihu na-agbasa, na-ezipụ ihe mgbagwoju anya n'ofe akụ crypto ka ndị ahịa na-atụfu ihe onwunwe ha maka ebumnuche mkpuchi, na-atụ egwu na ọnọdụ UST nwere ike ịdakwasị ndị ọzọ stablecoins. Justin Sun ewelitelarị nchegbu banyere TRX ịbụ ihe mgbaru ọsọ na-esote, na-akpali ya ka o wepụta atụmatụ iji mee ka USDD stablecoin malite na nso nso a nke na-eṅomi UST.
"Ọnụ ego ego maka ọnọdụ TRX dị mkpirikpi na Binance karịrị 100% kwa afọ. Ọ dị ka TRX bụ ebumnuche ọzọ na-esote LUNA. Ihe nchekwa TRON DAO ga-ekenye ijeri $ 2 iji lụso ha ọgụ, "Sun tweeted na Wednesde.
Ndị na-achụ ego Crypto na-echere usoro nhazi
NFT iji wusie ọnọdụ ụmụ nwanyị ike na Web3